Caafimaadka - dhammaan waxa ku saabsan caafimaadka ragga | Ragga Stylish
Caafimaadka oo keliya ragga maahan sida caadiga ah waxa ugu muhiimsan ee aan haysanno iyo waxa ugu badan ee aan ka walwalin karno daryeelkiisa, taasi waa sababta meeshan aan rabno inaan kuugu siino tabaha kala duwan, talooyin iyo waxyaabo badan oo badan oo ku saabsan wax kasta oo caafimaadka la xiriira.
Sidoo kale qaybtaan waxaad ka heli doontaa kuwo badan maqaallada aad ku daryeeli kartid kuna horumarin kartid caafimaadkaaga ama tan kuwa aad jeceshahay, markaa ha moogaanin fursad aad kula talin karto koonahan saaxiibbadaada ama qoyskaaga.
40 jirku maxay uga dhigan tahay ninka
by Alicia tomero samee Toddobaadyada 4 .
Waa marxalad dhaxal gal ah oo qof walba soo maray. Haa ama haa, ninku wuxuu gaadhi doonaa 40 sano jir wuxuuna...
Sida loo noqdo qof wanaagsan
by Alicia tomero samee Bilaha 2 .
Nolosheenna oo dhami waa jimicsi joogto ah oo caqabad iyo horumarin ah. Qaar badan oo naga mid ah ayaa gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa isku dayaya in aan fiicnaado
Sidee bay xiniinyaha ku jiraan
Xiniinyaha waa gondolas (qanjirka xubnaha taranka). Waxay ku yaalaan hoosta iyo labada dhinac ee xubinta taranka. Waxay ku xiran yihiin...
Ku buro xiniinyaha
by Alicia tomero samee Bilaha 3 .
Muuqashada buro ee xiniinyaha badanaa waa xaalad keeni karta nooc ka mid ah dhibaatada weyn ...
Sida looga fogaado ragga cellulite
Ragga ayaa sidoo kale la ildaran cellulite. Ma jiro jir iska caabin kara baruurta gudaha ee laga baqo, xitaa waxay u muuqataa ...
Sida loola dagaalamo cellulite
Kalluumeysiga farxadda leh waa qaab-dhismeed dhib badan oo dufan ah oo saameeya ragga iyo dumarka labadaba. Inta badan waa...
Dhiiga kaadida ee ragga
Weligaa ma maqashay hematuria? Waa kalmad tilmaamaysa marka ay dhibi ka jirto marinka...
Maxaa timahaygu u daadan
by Alicia tomero samee Bilaha 4 .
Timaha oo lumiya dhib weyn kuma aha ragga, laakiin sidoo kale dumarka. Waa la soo bandhigi karaa ...
Sida loo saaro hickey
Hickey waa astaanta lama -taabtaanka ah ee daqiiqad xamaasad leh. In kasta oo ay u muuqato wax la yaab leh haddana waxaa jira siyaabo iyo siyaabo looga saaro ...
Sida loo yareeyo baabasiirka
by Alicia tomero samee Bilaha 5 .
Baabasiirka ama sidoo kale loo yaqaan burooyinku waa kuuskuusyada ama burooyinka u muuqda barar futada u dhow, markaa ...
Daawooyinka guriga ee qolofta iyo cuncunka
by Alicia tomero samee Bilaha 6 .
Sidee ugu faraxsan yahay dandruff markaan maskaxda ku hayno oo waxay ina siin kartaa muuqaalkaas aan la rabin. Ka fog ...
Miisaan ku habboon nin
Waa maxay iyo sida looga hortago infekshinka kaadida ee ragga?
Sigaarka miiraha miyuu dhib yaryahay?
Phimosis, waa cudur aad u badan oo ku dhaca xubinta taranka ninka
Balanitis: Cuncun iyo guduudasho guska
«Macril»: ​​kareemka Antifungal
Baarkooda indhaha ma wax badan bay ka dhacayaan? Sababtoo ah?
Waa maxay madaxyada cadcad ee guska?
Kawaran hadaad qaadatid Viagra oo aadan ubaahanayn?
Kiniiniyada kahortaga biya baxa degdega ah ayaa horey loo iibiyay
Khuraafaadka iyo runta Viagra (I)
Tabaha loogu talagalay timaha garka ee soo gala
Sidee loola dagaallamaa astaamaha markaad sigaarka joojiso?